नेपाल आज | टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको ११ प्रतिशत मात्रै काम, अबको ८ महिनामा कसरी सकिन्छ ?
समाचार व्यापार Breaking News मुख्य समाचार देश राजनीति
टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको ११ प्रतिशत मात्रै काम, अबको ८ महिनामा कसरी सकिन्छ ?
शुक्रबार, २३ माघ २०७७ गते प्रकाशित - Vijay Singh
काठमाडौं । रसुवास्थित टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा लिएको चीनले हालसम्म ११ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रलयले चिनियाँ दूतावासलाई एक पत्र पठाउँदै नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरुले जिम्मा पाएका परियोजनाको निर्माण कार्य निकै सुस्त भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चीन र नेपालबीच १२ मे, २०१९ मा रसुवाको टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताका क्रममा उक्त परियोजना ३० डिसेम्बर २०२१ मा सम्पन्‍न गर्ने बताइएको छ । तर, निर्माण कार्य सम्पन्‍न हुन ८ महिनामात्रै बाँकी रहँदा ११ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्‍न भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “उक्त सम्झौता बमोजिम, टिमुर ड्राई पोर्ट परियोजना निर्माण कार्य सुरु भएको मितिदेखि ३० महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । अर्थात २०२१ सम्म डिसेम्बरसम्म ३० सम्म सम्मन्‍न गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्माण कम्पनीले सरकारको सम्बन्धित अधिकारीलाई पेश गरेको प्रगति प्रतिवेदन बमोजिम नेपालका हालसम्म कुल निर्माण कार्यमा ११ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ ।”
अहिले निर्माण कार्य रोकिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा रहेका चिनियाँ कामदारहरु नयाँ वर्ष मनाउन चीन फर्किएपछि काम अलपत्र परेको हो । केही मानिसहरु गत वर्षदेखि काममा फर्किएका छैनन् ।
नेपाल र चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका साथै दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार र कनेक्टिभिटीलाई अझ सुदृढ पार्ने महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले दूतावासलाई जन गणतन्त्रका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्चको ७० वर्षे इतिहाँस उल्टियो, झोलामा गोला देखेपछि इजलास फर्किए न्यायाधिश !
बस दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु, दुई जना घाइते